St. Kitts & Nevis waxay ansixisay baaritaanka Antigen -ka ee socotada socdaalka ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Saint Kitts iyo Nevis Breaking News » St. Kitts & Nevis waxay ansixisay baaritaanka Antigen -ka ee socotada socdaalka ah
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Saint Kitts iyo Nevis Breaking News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
St. Kitts & Nevis waxay ansixisay baaritaanka Antigen -ka ee socotada socdaalka ah.
Shaybaarada la ansixiyay wakhtigan waa: Shaybaadhka Joseph N. France; Xiga Gen Shaybaadhka; Shaybaadhka Avalon iyo Baadhista Tayada.
Tijaabada Antigen -ka ayaa la siin doonaa dadka safarka ah ee hawada ka baxa oo dalalkoodu aqbalaan tijaabo degdeg ah oo la ansixiyay marka ay ka soo noqdaan meelaha caalamiga ah.
Xiriirku waxa uu meesha ka saaray shuruudii looga baahnaa imtaxaanka bixitaanka ee dadka socotada ah ee wadamada ay ka yimaadeen aysan u baahnayn imtixaan soo laabasho ah.
Tijaabada bixista waxa lagu qaadi doona dadka soo booqda huteelka “Travel Approved” ama hoyga oo kaliya waxa fulinaya xirfadle caafimaad oo ay ogolaatay Wasaaradda Caafimaadka.
St. Kitts & Nevis ayaa shaaciyey shalay, Oktoobar 20, 2021, in tijaabada Antigen -ka loo fidin doono dadka safarka ah ee hawada ka baxaya kuwaas oo dalalkoodu aqbalaan tijaabo degdeg ah oo la oggolaaday marka ay ka soo noqdaan meelaha caalamiga ah. Xiriirku waxa uu meesha ka saaray shuruudii looga baahnaa imtaxaanka bixista dadka socotada ah ee waddama ay asal ahaan ka soo jeedaan aan u baahnayn imtixaan soo laabasho ah.
Tijaabada bixista waxa lagu qaadi doona booqdayaasha huteelka “Travel Approved” ama hoyga oo kaliya oo ay ogolaatay Wasaaradda Caafimaadka xirfadleyaasha caafimaadka 48 – 72 saacadood ka hor bixitaanka, iyada oo muunado lagu tijaabinayo shaybaar maxalli ah oo la aqoonsan yahay. Jadwalka imtixaanku waa inuu maraa hudheelka hudheelka ee huteelada "Safarka La Oggolaaday" ee kala ah; dadka socotada ah ee degan guryaha filooyinka ah, guryaha is-kaashatada iyo/ama guryaha gaarka ah waxaa lagula talinayaa inay la xiriiraan COVID-19 Task Force hotline 311 ama [emailka waa la ilaaliyay] si ay u jadwaleeyaan imtixaankooda. Fadlan la soco in imtixaanadu ay ku fadhiyaan qiimaha qofka socotada ah oo qiimahoodu u dhexeeyo USD 50.00 iyo USD 55.00.
Si aad u soo gasho Federation of St. Kitts & Nevis, Dhammaan Hab-maamuusyada Safarka iyo Shuruudaha ayaa weli jira, oo ay ku jiraan soo gudbinta natiijooyinka baaritaanka diidmada ee baaritaanka RT PCR 72 saacadood ka hor imaanshaha.
Soo-booqdayaasha waxaa lagu xasuusinayaa inay si joogto ah u hubiyaan Maamulka Dalxiiska ee St. Kitts iyo Maamulka Dalxiiska Nevis boggaga internetka wixii cusbooneysiin iyo macluumaad ah.